Sei maKristu asingazorore paSabata? ▷ ➡️
Sei maKristu asingazorore paSabata?
Sei maKristu asingazorore Mugovera? MaKristu haasungirwe kuchengeta Sabata, asi zvakakosha kuti uve naro nguva yekuzorora. Mukristu wese anofanira kuteedzera hana yake paSabata, sezvo Mwari akatipa zororo sechikomborero.
Kuchengeta Sabata ndeumwe wemirairo inegumi. Mugovera waifanirwa kunge uri zuva apo munhu wese aigona kuzorora nekuvandudza simba ravo. Zororo raibatanidzwawo ne wana nguva yezvinhu zvaMwari. Testamente Yekare inopa tsananguro mbiri dzeSabata:
Raive zuva rakazorora Mwari mushure mekusika nyika.
Kurangarira kuti Mwari akanunura vaIsraeri kubva mukudzvinyirirwa kwavakaitwa muIjipita.
1 Sei maKristu Asingazorore paSabata?: Zvinotaurwa neTestamente Itsva
2 Icho chirevo chechokwadi cheSabata muBhaibheri
Sei maKristu Asingazorore paSabata?: Zvinotaurwa neTestamente Itsva
Testamente Itsva inotii pamusoro pekuchengeta Sabata
Sabata waive murairo kuvaIsraeri. Kunyange zvakadaro, Testamente Itsva haitaure kuti tinofanirwa kuchengeta Sabata. Jesu aishanda paSabata, achiporesa vanhu uye achiparidza (Mateo 12: 10-12). Haana kurambidza vadzidzi vake kuita zvimwe zviitiko paSabata. Mukereke yekutanga, vapostori vaitendera mumwe nemumwe kutevera hana yake kuti achengete Sabata here kana kuti kwete.
Zvino tarira, kwakange kune munhu wakange ane ruoko rwakawonyana. uye vakabvunza Jesu, kuti vamupomere: Zvinotenderwa kuporesa nesabata?
Akati kwavari: Ndeupi munhu kwamuri uchava negwai, uye kana rikawira mugomba nesabata, angarega kuribata akasimudza?
Nekuti munhu unopfuura gwai zvikuru sei! Naizvozvo, zvinotenderwa kuita zvakanaka nemasabata.
Mateu 12: 10-12
Jesu akatsanangura izvozvo Mugovera wakagadzirwa semaropafadzo kune zvakanaka zvedu. Chinangwa chaisave chekuteerera mutemo chero zvodii, asi kuve nekodzero yekuzorora uye Nakidzwa nemakomborero aMwari. Kunyangwe pasi pemutemo weTestamente Yekare, paive nemamiriro ezvinhu zvaigamuchirwa kusachengeta Sabata (Mateo 12: 5-7).
Kana hamuna kuverenga here pamurairo, kuti nemasabata vapristi mutembere vanosvibisa sabata, uye vasina chavangapomerwa?
Zvakanaka ndinokuudza izvozvo mukuru pane tembere iri pano.
Uye dai waiziva zvazvinoreva: Ndinoda ngoni, uye kwete chibayiro, haungapi mhosva vasina mhosva.
Mateu 12: 5-7
Gare gare, kereke yekutanga yakatanga kusangana nemusi weSvondo, rinova zuva iro Jesu akamutswa kuvakafa. Vachiona kukosha kwekuzorora kwehutano hwepanyama, hwepfungwa, uye pamweya, maKristu akatanga kuzorora neSvondo. Kune Mukristu, kuva nezuva rekuzorora ikodzero, kwete basa.
Icho chirevo chechokwadi cheSabata muBhaibheri
"Mugovera" muchiHebheru zvinoreva "zuva rekuzorora." Kuzorora mubhaibheri chikomborero. Mugovera unofananidzira humwe hupenyu husingaperi: zororo kubva kuzvivi nekutambura. Avo vanoramba Jesu uye vanoraramira zvivi havambozoziva zororo irori.
Zuva reMugovera pacharo harina kukosha kwakakosha, asi zvarinomiririra zvakakosha zvikuru. Testamente Itsva inojekesa izvozvo chinonyanya kukosha moyo. Tinofanira kuita zvese kuitira kubwinya kwaMwari. Vamwe vanhu vanochengetera Mwari Mugovera, vamwe vanhu vanochengetera Mwari Svondo; vamwe vanhu vanochengetera zvishoma zvishoma zuva rega rega kuna Mwari. Naizvozvo, chinhu chega chakakosha ndechekukudza Mwari.
Mumwe anoita mutsauko pakati pezuva nezuva; mumwe anotonga zvakafanana mazuva ese. Mumwe nemumwe ane zvakawanda zvinogutsa nezve pfungwa yake.
Iye anoteerera zuva anozviitira Ishe; uye iye anoregera zuva haaizvi zviiti kuna She. Iye anodya, nekuti anodya, nekuti unotenda kuna Mwari; neusingadyi, nekuti Ishe haadyi, uye uchavonga Mwari.
VaRoma 14: 5-6
Mumwe nemumwe anofanira kutsvaga kuda kwaMwari pahupenyu hwake. Kunyangwe iwe chengeta Mugovera kana kwete remekedza sarudzo yevamwe maKristu. Kuchengeta Mugovera, kana rimwe zuva revhiki, inyaya yehana yemunhu. Chinhu chakanyanya kukosha kuwana nguva yekuzorora uye kutarisa kuna Mwari.
Naizvozvo, ngakurege kuva nemunhu unokutonga mukudya kana chinwiwa, kana semazuva emabiko, kugara kwemwedzi kana masabata, zvese izvi mumvuri wezvichauya; asi muviri ndowaKristu.
VaKorose 2: 16-17
Ndinovimba ichi chinyorwa chinokubatsira kuti unzwisise sei maKristu vasingazorore Mugovera. Kana iwe uri Mukristu uye uchida kuziva zvimwe chokwadi chemuBhaibheri, heinoi imwe nhungamiro yatinotsanangudza ko kuuya kwechipiri kwaJesu kuchave sei. Totanga here?
Sei Mwari akazorora nezuva rechinomwe?
Ko kuuya kwechipiri kwaJesu kuchave sei